फंगल संक्रमण - डर्म्याटोलोजी को क्षेत्र मा एक प्रमुख समस्या। सबैभन्दा अक्सर नङ प्लेट र छाला असर गर्छ। विकृति गम्भीर परिणाम बच्न रूपमा प्रारम्भिक सकेसम्म उपचार गर्न सिफारिस गरिएको छ। antifungal लागूऔषधको एक "Ekodaks" (मलम) छ। दबाइ पुस्तिका यसको चिकित्सकीय कार्य को संयन्त्र बताउँछन् र आवेदन को विधि वर्णन गर्दछ। सामना गर्न विशेषज्ञ भेटघाट गर्न विषय रोग एकदम छिटो सकिन्छ।
"Ekodaks" - antifungal मलम भारतीय औषधि कम्पनी द्वारा निर्मित। उपकरण एक fungicidal, bactericidal र fungicidal गुण छ। सक्रिय पदार्थ nanodiamonds उपयोग गरदै - econazole नाइट्रेट - को IMIDAZOLE व्युत्पन्न स्वामित्वको एक पदार्थ। दमन को संभावना आधारित चिकित्सकीय एजेन्ट को कार्य को संयन्त्र ergosterol, सूक्ष्मजीवहरु को सेल पर्खालहरु को permeability को विनियमन लागि जिम्मेवार bisinteza।
सहायक पदार्थ जस्तै क्रीम घटक मा लागू गरियो रूपमा फस्फोरिक एसिड, hlorokrezol, तरल खुट्टाफिन, सोडियम हीड्राकसीड, cetomacrogol, खनिज तेल, सोडियम dihydrogen फस्फेट dehydrate, cetostearyl रक्सी।
के "Ekodaks" प्रयोग गरिन्छ गर्छ?
आधिकारिक वक्तव्य अनुसार, मलम "Ekodaks" dermatophytes, yeasts र ढुसी लागेको Fungi आदर प्रभावकारी हुन्छ। साधन मानाङ्कन र केही ग्राम सकारात्मक रोगजनकों विरुद्ध (Staphylococcus, Streptococcus, को जीनस एन को सूक्ष्मजीवहरु)।
फंगल - के "Ekodaks" को पहिलो causative एजेन्ट घटक सूक्ष्मजीवहरु संवेदनशील छ भने प्रयोग गर्नुपर्छ छ। Antifungal एजेन्ट निम्न रोगबाट को उपचार को लागि संकेत:
नङ प्लेट (onychomycosis) को फंगल संक्रमण;
छाला (dermatitis) को एक च्याउ द्वारा हार;
कान नहर को mycotic संक्रमण;
thrush (vulvovaginal mycosis)।
औषधि "Ekodaks" (मलम): प्रयोगको लागि निर्देशन
Antifungal बाह्य अनुप्रयोगको लागि विशेष इरादा। मलम को पातलो पत्र फंगल रोगजनक प्रभावित क्षेत्र मा लागू छ, जबसम्म यो पूर्ण अवशोषित हुन्छ माथि दल्नु। यो lesion को Folds छ भने, रूँदै छाला पूर्व-सुक्खामा आवश्यक छ। उपचार को अवधि फंगल संक्रमण चरण मा निर्भर गर्दछ। केही अवस्थामा, पर्याप्त दुई-हप्ता चिकित्सकीय पाठ्यक्रम। tinea pedis को उपचार मा अब उपचार (कुनै कम6भन्दा सप्ताह) आवश्यक छ।
तर को रूप मा intravaginal दबाइ प्रयोग गर्दा applicator प्रबन्ध गर्न। उपचार 14 दिनको लागि जारी गर्नुपर्छ। otomycosis हालतमा गर्भवती gauze turunda समाप्त हो र कान नहर यसलाई सम्मिलित गर्न।
onychomycosis मलम कस्तो व्यवहार गर्ने?
सुविधा कम गंध छ, सजिलै अवशोषित हुन्छ, यो छाला च्याउ र नङ प्लेट को उपचार मा प्रयोग गर्न सकिन्छ। onychomycosis मा हुन पूर्व बाफ बाहिर नङ। यो गर्न, न्यानो पानी साबुन र लवण को एक सानो राशि भंग गर्न आवश्यक छ। धमाकेदार नङ प्लेट कैंची संग कटौती गरिएको छ, र दूर ठाउँहरू नङ फाइल प्रशोधन गर्न।
प्रभावित नङ प्लेट गर्न दुई पटक लागू हुनुपर्छ एक दिन तयारी "Ekodaks"। मलम पुस्तिका दुई महिना को एक न्यूनतम सुझाव दिन्छ। थप उच्चारण चिकित्सकीय प्रभाव एजेन्ट लागि अन्तर्गत लागू छ एक occlusive लाउने। यसलाई अक्सिजन को पहुँच ब्लक र जीवाणु संक्रमण को विकास रोक्न आवश्यक छ।
को प्रयोग गर्न Contraindications
Antifungal एजेन्ट "Ekodaks" (बाहिरी आवेदन लागि क्रीम) सामाग्री र गर्भावस्था को समयमा अतिसंवेदनशीलता को मामला मा, छोराछोरीको फंगल संक्रमण 16 को उमेर अन्तर्गत उपचार गर्न प्रयोग गरिएको छ। खनिज तेल वा पेट्रोलियम जेली आधारित अन्य intravaginal एजेन्ट को उपचार मा "Ekodaks" प्रयोग गर्नुपर्छ।
बाह्य प्रयोगको लागि विरोधी-फंगल दबाइ साधारण तरिकाले सहन छ, साइड इफेक्ट कारण छैन। दुर्लभ अवस्थामा मात्र, विरामीहरु तयारीको "Ekodaks" संग उपचार साइटहरू मा जलन अनुभूति, खुजली को उपस्थिति रिपोर्ट। यस्तो urticaria, छाला hyperemia र atrophy रूपमा स्थानीय एलर्जी प्रतिक्रिया, सम्पर्क dermatitis केही अवस्थामा विकास।
कुनै पनि पक्ष-प्रभाव हालतमा "Ekodaks" (मलम) को प्रयोग गरेर रोक्नु पर्दछ भने। यस मामला मा निर्देश यो तपाईं फंगल संक्रमण थप उपचारको लागि अर्को दबाइ चयन गर्न गर्ने एक विशेषज्ञ, परामर्श गर्न सिफारिस गरिएको छ।
दबाइ cetostearyl रक्सी, छाला रीस उठाउनु सक्छ जो एक भाग समावेश गर्दछ। हामी अनुहार मा क्रीम प्राप्त अनुमति सक्दैन। जब घटक गर्न अतिसंवेदनशीलता वा घृणाको को लक्षण लेप प्रयोग गर्न बन्द गर्नुपर्छ।
उपचार एजेन्ट मा खातामा कि बोसो आधार लिन र लेटेक्स निरोधकों नष्ट गर्नुपर्छ। आफ्नो चिकित्सकीय प्रभाव inactivating spermicides क्रीम को कार्य मा नकारात्मक प्रभाव।
धेरै विरामीहरु लागूपदार्थ "Ekodaks" को चिकित्सकीय प्रभाव सन्तुष्ट छन्। समीक्षा मलम पर्याप्त प्रभावकारी छ भन्ने, र प्रयोग गर्दा सही ढंगले फंगल संक्रमण तीब्र निपटान योगदान गर्दैन। यस च्याउ लक्षण को लापता पछि थप केही दिन को लागि उपकरण प्रयोग गर्नुपर्छ। एक महत्वपूर्ण फाइदा "Ekodaks" हालतमा को लागत छ। मूल्य ट्यूब (10 ग्राम) 140-160 rubles छ। यो लेप धेरै सस्ता र बाह्य प्रयोगको लागि अन्य लोकप्रिय antifungal तयारी भन्दा कम प्रभावकारी छैन।
के "Ekodaks" प्रतिस्थापन गर्न सक्छ?
फार्मेसी काउन्टर, तपाईं विरोधी-फंगल क्रीम र nanodiamonds उपयोग गरदै एक विशाल संख्या देख्न सक्छौं। लोकप्रिय "Ekodaksa" analogues निम्न दबाइहरु हो:
"Zalain" (क्रीम, suppository)।
Antifungal एजेन्ट एक त्वकरोग वा mycologist टिप्न गर्नुपर्छ। एक फंगल संक्रमण उपचार गर्न आत्म-दबाइ सिफारिस गरिएको छैन।
मृगौला चिया। निर्देशन तपाईं भन्नेछु कसरी लिन
दबाइ "Codeine"। निर्देशन
Salicylic एसिड: समीक्षा, प्रयोगको लागि निर्देशन
"Ospamoks": निर्देशन। प्रयोगको लागि समीक्षा, मूल्य सङ्केत गर्छ
बच्चाहरु को लागि Motilium (निलम्बन)
दबाइ "Lizoformin 3000": प्रयोग, वर्णन, मूल्य लागि निर्देशन। समीक्षा "Lizoformine 3000"
"बर्च Grove" सलाद: व्यञ्जनहरु, सजाय को तरिका
जौ MALT: कसरी र के प्रयोगको लागि?
रोमन Kachanov - रूसी फिलिम निर्देशक, Screenwriter र अभिनेता: जीवनी, रचनात्मकता
Multivarka मा पोर्क ragout: सरल व्यञ्जनहरु
चिकन Livny chintz: नस्ल को विवरण
एक चाटुकर के हो? को ब्लेंडर को स्वास्थ्य
Klas डोम Anex होटल। Alanya होटल नक्शा। टर्की5ताराहरु मा सबै भन्दा राम्रो होटल
पीसी त्रुटिहरू कसरी मिलाउने? कार्यक्रम तपाईँको कम्प्युटरमा, बग
अर्थव्यवस्था - यो के हो? राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास
मर्सिडीज ई 200 जर्मन गुणस्तर